Mpanamboatra sy mpamatsy XPON ONU | China XPON ONU Factory
34234GDE no fitaovana famaranana andian-dahatsoratra XPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3. Miorina amin'ny teknolojia GPON matotra sy marin-toerana ary lafo vidy izay mandray chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fanamafisana malefaka, hamafisana, fiantohana serivisy tsara (Qos). 34234GDE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN sy MT7612EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny IEEE802.11b / g / n ary ...
34123GDE no fitaovana famaranana andian-dahatsoratra XPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3. Miorina amin'ny teknolojia GPON matotra sy marin-toerana ary lafo vidy izay mandray chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fanamafisana malefaka, hamafisana, fiantohana serivisy tsara (Qos). 34123GDE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n. Izany koa ...
32123GDE no fitaovana fijanonana andian-dahatsoratra XPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3. Miorina amin'ny teknolojia GPON matotra sy marin-toerana ary lafo vidy izay mandray chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fanamafisana malefaka, hamafisana, fiantohana serivisy tsara (Qos). 32123GDE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n.
3434GE2 no fitaovana famaranana andian-dahatsoratra XPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3, izay miorina amin'ny matotra sy marin-toerana ary lafo be- teknolojia GPON mahomby izay mandray chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fikirakirana malefaka, fahamendrehana, antoka tsara momba ny serivisy (Qos). 3434GE2 dia manohana WIFI4 (IEEE802.11b / g / n) sy WIFI5 (IEEE802.11ac). Izy io koa dia manome ny mpitantana WEB ...
3413GE no fitaovan'ny terminal an'ny XPON andiany iray izay manaraka tanteraka ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mahafaly ny herijika ny protokol G.987.3. Miorina amin'ny teknolojia GPON matotra sy miorina ary lafo vidy izay mampiasa chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana ambony, fitantanana mora, fanamafisana malefaka, fahamendrehana, fiantohana serivisy tsara (Qos). 3413GE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n.
3412GDE no fitaovana famaranana andian-dahatsoratra XPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3. Miorina amin'ny teknolojia GPON matotra sy marin-toerana ary lafo vidy izay mandray chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fanamafisana malefaka, hamafisana, fiantohana serivisy tsara (Qos). 3412GDE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n. Izy io koa dia p ...
3213GE no fitaovan'ny terminal an'ny XPON andiany iray izay manaraka tanteraka ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mahafaly ny herijika ny protokol G.987.3. Miorina amin'ny teknolojia GPON matotra sy marin-toerana ary lafo vidy izay mandray chipset XPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fanamafisana malefaka, hamafisana, fiantohana serivisy tsara (Qos). 3213GE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n. Izy io koa dia pro ...
341GE no fitaovana famaranana andian-dahatsoratra GPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3, izay miorina amin'ny fahamatorana, tsy miovaova ary avo lenta. Teknolojia GPON izay mandray chipset GPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fikirakirana malefaka, fahamendrehana, antoka tsara momba ny serivisy (Qos). 341GE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n. Izy io koa provi ...
321GE no fitaovana fijanonan'ny andian-dahatsoratra XPON izay mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ITU-G.984.1 / 2/3/4 ary mihaona amin'ny fitsitsiana angovo an'ny protokol G.987.3, izay mifototra amin'ny fahamatorana, tsy miovaova ary avo lenta. Teknolojia GPON izay mandray chipset GPON ZTE avo lenta ary manana fahamendrehana avo lenta, fitantanana mora, fikirakirana malefaka, fahamendrehana, antoka tsara momba ny serivisy (Qos). 321GE dia mandray ny tetikady MTK MT7603EN ho an'ny fampiharana WIFI izay manohana ny fenitra IEEE802.11b / g / n. Izany koa prov ...